How to Handle an Arrogant Co-worker? ﻿
How to Handle an Arrogant Co-worker?
မာန်မာနထောင်လွှားနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ?
မိမိဟာ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိမိတာဝန်ယူထားရတဲ့အလုပ်များနဲ့ မိမိဌာန၊ မိမိကုမ္ပဏီရဲ့ တိုးတက်ရာတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုသာ တွေးတောဆောင်ရွက်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်နေသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ မာန်မာနထောင်လွှားပြီး ကြွားဝါတတ်သူများ၊ မိမိရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်များကို အလွန်အကျူး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်ပြီး အခြားသူများကိုတော့ နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်သူများကို စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ရိုင်းပျတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ထိုလုပ်ရပ်များကိုသာ တွေးတောစဉ်းစားနေခဲ့မယ်ဆိုပါက မိမိတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ တက်လမ်းနဲ့၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကိုပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်စေတဲ့အတွက် ထိုကဲ့သို့သောသူများနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို www.jobsinyangon.com ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၁။ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
အခြားသူရဲ့အကြောင်းကို ပြောဆိုခြင်းမပြုမှီတွင် ပထမဦးဆုံး မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်၍ လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ မာန်မာနထောင်လွှားတတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကြောင့် ရံဖန်ရံခါ စိတ်ညစ်ညူးရပြီး စိတ်ရှုပ်ရခြင်းတို့ ဖြစ်လာခြင်းဟာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပေမယ့် ဒီအပြုအမူများကို မကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ ထိုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်ခံနေစရာမလိုပါဘူး။
အခြားတစ်ဖက်မှာ သင်ဟာ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကြောင့် လွန်မင်းစွာ စိတ်ရှုပ်လာခြင်း၊ ဒေါသထွက်လာခြင်းတို့ဖြစ်လာပြီး စိတ်အာရုံစူးစိုက်၍မရနိုင်ဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ထိုသူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုသာ ထိုင်ပြီးပြောနေလိုစိတ်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုများက သင့်ရဲ့ career ကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်တတ်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
ခါးသီးတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်များဟာ မကြာခဏဆိုသလို သင့်ကို ဒေါသထွက်စေခဲ့ပါက ထိုသူရဲ့လုပ်ရပ်များက ပြဿနာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်များ လွန်ကဲနေတာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို သင့်ရဲ့ မသိစိတ်က မနာလိုဖြစ်နေခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိုသူနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုက်ပါက စိတ်အားငယ်နေခြင်းတို့ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို မိမိ အရင်ဆုံး နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိစေရန် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ အခြားမည်သူ့ကိုမှ ထုတ်ဖော်ပြောပြနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒီကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို သိရှိနားလည်မှုရှိအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်အချက်များတွင် သင့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်များကို အလဟသတ် အဖြစ်မခံပါနဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မာန်မာနထောင်လွှားမှုအပေါ် မိမိက ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါက ဘယ်အရာမှ ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။ အကယ်၍ သင့်အပေါ် မာန်မာနထောင်လွှားနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (ဒါမှမဟုတ်) မည်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မျိုးကမဆို သင့်ရဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံနဲ့ တုန့်ပြန်ပုံများ ကောင်းမွန်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ကို မည်ကဲ့သို့ချောက်တွန်းရမလဲဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားနိုင်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ အလဟသတ်ကုန်ဆုံးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ထိုသူဟာ မာန်မာနထောင်လွှားပြီး စိတ်ကောင်းမရှိသူတစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့ပါက ဒီအချက်ကိုအသုံးပြု၍ သင့်ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးကာ သင်ပေါက်ကွဲထွက်လာမယ့်အချိန်ကို အေးအေးဆေးဆေး စောင့်ဆိုင်း၍နေရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာတော့ အခြားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက သင့်ကို အရူးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ထင်မြင်သွားစေနိုင်ပြီး ထိုသူကတော့ ဆက်လက်၍ မာန်မာနထောင်လွှားမြဲ မာန်မာနထောင်လွှားနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကို တုန့်ပြန်နေမယ့်အစား ထိုသူဟာ သင့်အားဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ တိုက်ခိုက်နေရသလဲဆိုတာကို နားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါကို သဘောပေါက်ထားခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေများကို သင့်ဖက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ထိုသူကအလုပ်တစ်ခုကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး မာန်မာနထောင်လွှားနေခြင်းကို သင်ကြည့်မရခဲ့ပါက ဒီအချိန်ဟာ သင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာများကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်၍ ထိုအရာများကို လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုသည်အား အကြံထုတ်ရမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှသာ သင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာများကတဆင့် အသိအမှတ်ပြုခံရမှုများကို သင်လည်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်အာရုံစိုက်၍ လုပ်ဆောင်နေသင့်တဲ့ အရာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ နောင်ရေးအတွက် မိမိရဲ့ personal brand ကို တည်ဆောက်နေခြင်းနဲ့သာ အချိန်ကုန်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုသူ့အကြောင်း ထိုင်စဉ်းစားနေဖို့ အားလပ်ချိန်တောင် ရှိတော့မယ်မထင်ပါဘူး။
၃။ ထိုသူနဲ့ အတူရှိရမယ့်အချိန်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်၍ မိမိလုပ်စရာရှိတဲ့ ကိစ္စများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပါ။
မည်သို့ပင် စိတ်နေသဘောထား တည်ငြိမ်အေးဆေးသူတစ်ဦးဖြစ်နေပါစေ အချို့သောသူများနဲ့ ဆက်ဆံရာတွင် သင့်အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စိတ်တိုဒေါသထွက်မှုလေးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူသားများဖြစ်ကြတဲ့အတွက် အချို့သောသူများနဲ့ မသင့်မြတ်မှုလေးတွေရှိလာနိုင်တာဟာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကယ်၍ မာန်မာနထောင်လွှားတဲ့သူမျိုးနဲ့ အတူတကွလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရပြီဆိုပါက ထိုသို့အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရမယ့်အချိန်ကို အတိုဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ကြိုးစား၍ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ မလွှဲမရှောင်သာ အတူတကွလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရတဲ့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးရန်လိုနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ထိုသူနဲ့ လုပ်ငန်းပရောဂျက်တစ်ခုတွင် အတူတကွလက်တွဲ၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါက အစည်းအဝေးပွဲများအတွက် တိကျတဲ့ စတင်ချိန်နဲ့ ပြီးဆုံးချိန်ကို သတ်မှတ်ထားပါ။ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီးပါက အခြားသော ကိစ္စများကိုအကြောင်းပြ၍ ထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားလိုက်ပါ။ သင်တို့နှစ်ဦး တွေ့ဆုံ၍ စကားပြောရချိန်တွင် လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပါ။ အခြားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကို ပြောလာပါက “Wow ဒါက စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ကယ်ကောင်းပါတယ်” ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်နေရင် ကျနော့်မှာချိန်းထားတာလေးတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက် လက်ရှိ အလုပ်ကိစ္စကို အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရအောင် ဟူ၍ ပြောဆိုလိုက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကိုယ်သင်သာ ထိန်းချုပ်၍ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အခြားသူများကို သွားရောက်ထိန်းချုပ်၍ မရနိုင်တဲ့အချက်ကို သတိပြုပါ။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ သင့်ရဲ့အချိန်များကို ထိုသူ့အကြောင်းသာ စဉ်းစားနေခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးနေခြင်း၊ သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုဟာ ထိုသူ့ထံမှာပဲရှိနေခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါက ထိုသူများကသင့်ကို ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုသာ အာရုံစိုက်၍ ပြဿနာရှာတတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ အတူတကွတွေ့ဆုံချိန်ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါးအောင် လျှော့ချထားလိုက်ပါ။ ဒါမှသာ သင့်အနေနဲ့ ပိုမို၍တည်ငြိမ်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ပိုမို၍တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။